Nokia ayaa dhawaan ka daawan doonta Telefishanka Smart TV dalka Hindiya | Androidsis
Eder Ferreño | | Aaladaha Android, Qalabka kale
Noocyo aad iyo aad u badan oo ku saabsan Android gasho suuqa Smart TV. Waxaan aragnay shirkado sida Xiaomi ama dhawaan OnePlus waxay sii daayeen telefishanno iyaga u gaar ah. Iyagu ma noqon doonaan noocyada kaliya ee macnahan ku jira, maxaa yeelay nooc cusub ayaa lagu daray liiskan, oo dad badan la yaab ku noqon doona. Kani waa Nokia.
Shirkadda ayaa ka shaqeysa daahfuraya TV-gii ugu horreeyay ee Smart ah gudaha Hindiya muddo yar kadib. Nokia Smart TV waa magaca loo yaqaan TV-ga shirkadan, oo la filayo in dhawaan si rasmi ah loo howlgaliyo. Hordhac ay ku galaan qayb cusub oo suuq ah, halkaas oo ay u arkaan inay jirto karti.
Xaaladdan oo kale, Nokia ayaa iskaashi la yeeshay Flipkart, Dukaanka ugu weyn ee khadka tooska ah ee Hindiya, loogu talagalay daahfurkaan. Hadda waxaan haynaa faahfaahin yar oo ku saabsan, in kasta oo la og yahay inay adeegsan doonto codka JBL. Waxay u maleyneysaa soo galitaanka labada shirkadood suuqan markii ugu horeysay.
Shaki la'aan, waa halis shirkadda. Dhinac, waa qeyb suuq ka duwan ta taleefannada, marka lagu daro soo gelitaanka suuq gebi ahaanba ka duwan, sida Hindiya. Marka waa qiyaasta qof walba haddii ay guuleysanayaan, gaar ahaan haddii aan tixgelinno in suuqani xoogaa dheregsan yahay.
Lama siin waqtigan Taariikhihii la soo saari lahaa Nokia Smart TV. Wax walba waxay muujinayaan inay waqti yar kadib noqon doonto goorta la soo bandhigi doono, laakiin ma ogin wax ilaa iyo hadda arrintan la xiriira. Shaki la'aan, waxay u noqon kartaa daah fur muhiim shirkadda. Su’aal kale ayaa ah TV-ga ma laga daawan doonaa Yurub?
Sida aad arki karto, jawaabo dhawr ah ayaa ka maqan arrintan. Waxaa laga yaabaa in dhowaan waxaan heli doonaa jawaabaha oo dhan ku saabsan Nokia Smart TV, kaas oo ballan qaadaya inuusan cidna uga tagaynin danayn. Sidaa darteed, waxaan dheg u noqon doonnaa wararka ku saabsan imaatinkiisa suuqa, kaasoo hubaal dhawaan noqon doona.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Nokia waxay si dhakhso leh u daahfureysaa telefishanka Smart TV-ga Hindiya